Iza no tantara tianao indrindra tato amin’ny Global Voices tamin’ny taona 2015? · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 15 Jona 2019 2:55 GMT
(Lahatsoratra nivoaka tamin'ny volana Desambra 2015)
Afomanga nandritra ny fankalazana ny taombaovao tamin'ny taona 2005 tany Bratislava. Sary avy amin'i Ondrejk tao amin'ny Wikipedia Commons. Azon'ny rehetra ampiasaina.
Midika ny fahatongavan'ny Taom-baovao fa ho tondraky ny lahatsoratry ny fampahalalam-baovao mahazatra ny tambajotra sosialy izay mampahafantatra ireo mpamaky ny zavatra “tsara indrindra” nitranga ny taon-dasa. Ity no fotoana tsara indrindra hampahatsiahivana amin'izao tontolo izao ireo tantaran'ny Global Voices be mpamaky tamin'ny taona 2015, ary iza no afaka hanao izany tsara kokoa mihoatra noho ny vondrom-piarahamonintsika mahatalanjona samihafa?
Miaraka amin'izany ao an-tsaina, manontany ny GVers rehetra ary izahay hoe:
Inona no tantara tianao indrindra tato amin'ny Global Voices tamin'ny taona 2015?
Mety ho tantara nahagaga anao izany na nanohina anao tamin'ny fomba hafa, niady tamin'ny hevi-draikitra izay notazoninao, niteraka adihevitra, na iray izay niasanao manokana ary nampihiratra ny fahazavanao.
Hangonintsika miaraka ny valinteny rehetra ao anaty lahatsoratra hivoaka ato amin'ny tranokalan'ny Global Voices.